नेपाल टेलिकमको सेवालाई गुनासोरहित बनाउन प्रतिवद्ध छुः कामीनी राजभण्डारी (भिडियो) - TV Annapurna
November 22, 2017 March 30, 2018 Annapurna TV
सरकारी स्वामित्वको नेपालको सर्वाधिक मुनाफा कमाउने कम्पनीकी प्रमुखका रुपमा कामिनी राजभण्डारी छन् । बि.स. २०७३ साल असोज ६ गते आवेदन दिएका दर्जन प्रतिस्पर्धीलाई पछि पादैं उनि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेकी हुन् । कामीनी मर्मतसम्भार शाखामा सातौ तहबाट सेवा प्रवेश गरेकी थिईन् । ३० वर्षदेखी नेपाल टेलिकमकै जागिरे राजभण्डारी टेलिकमभित्र बिभिन्न विभागको नेतृत्वमा रहेर उत्कृष्ट कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै आएकी छन् ।
नेपाल टेलिकमले विकास गरेको अत्याधुनिक प्रविधीसहितको फोरजी सेवा थालनीको नेतृत्व गरेकी राजभण्डारीसँग थुप्रै लोकप्रिय सेवा सञ्चालनको अनुभव छ ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा नेपाल टेलिकमको सेवामा गुणस्तरीयता बृद्धि गर्न सफल प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीसँग नेपाल टेलिकमका भावी योजना र वर्तमानका समस्याहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर टिभी अन्नपूर्ण रिपोर्टर सुकदेव चापागाई र श्री प्रसाद सुबेदीले गरेको कुराकानी :
तपाईको नियुक्त हुदाँ महिलाले पनि नेपाल टेलिकम हाँक्न सक्छन् भन्नेहरु पनि थिए । के छ तपाईले नेतृत्व लिएपछिको अवस्था ?
मैले यो कम्पनीमा तह ७ देखी शुरु गरेर तीस बर्ष विभिन्न विभागमा रहेर काम गरे । त्यो अनुभवका कारण पनि नेपाल टेलिकमको बिगतको आम मानिसको बिश्वासलाई कायम राख्दै यसलाई अझै अघि लैजाने काम गरेको छु । जुन कुरालाई आम ग्राहकको हामी प्रतिको विश्वासले प्रमाणित गर्दछ ।
नेपाल टेलिकमको गुणस्तर समयअनुकुल भएन भन्ने जस्तो लाग्छ ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
सबै काम पूर्ण र सोचेजस्तो त नहुन पनि सक्छ त्यसैले हामीसँग पनि केही समस्या पक्कै छन् । यसकारण आम ग्राहकहरुबाट आउने यस्ता प्रतिक्रियालाई हामी सुझावका रुपमा लिएर हाम्रो सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध र तत्पर छौं । म हजुरहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । पछिल्लो समय हाम्रो सेवाको गुणस्तरको बिषयमा भन्दापनि ग्राहकको गुनासा हेर्ने सवालमा केही समस्या भयो भन्ने एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो । त्यो लगत्तै हामीले ग्राहकका गुनासा हेर्नका लागी बिशेष ख्याल गदैछौं ।
केही समयअघि नेपालमा यहाँहरुले बिस्तार गरेको फाईबरसँग छिमेकी मुलुक चीनले फाईबर बिच्छाउने काममा सहयोग गर्नेसम्मका कुरापनि आएका थिए त्यो कुरा अहिले के भइरहेको छ ?
हो हामीले आन्तरिक रुपमा तयारी अघि बढाइसकेका छौ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाईबर बिच्छाउने लगायतका धेरै कार्यक्रममा लागी सर्वेक्षण गरिसकेको छौ । भारतको टाटा र एयरटेल सँग हाम्रो कनेक्सन यसअघि नै भइसकेको छ । अहिले यसलाई अझै बृहत बनाउन चाईना टेलिकमसँग पनि सम्झौता गरेको कुरा सत्य नै हो । यसको काम प्रक्रियामै छ यसलाई छिट्टै अघि बढाउछौं । प्रदेश नम्बर १, २, ३ मा फाईबर बिस्तार गरेर सेवा दिने सम्झौता भईसकेको छ । हाम्रो उदेश्य भनेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा जति सक्दो छिटै नै ब्रोडबैण्ड सेवा प्रदान गर्नु हो ।
नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा भएको थियो । अहिले यसको प्रकृया कहाँ पुगेको छ ? रणनीतिक साझेदार किन गर्नुप-यो र यसबाट के फाईदा देखिन्छ ?
स्टाटेजिक पार्टनर भित्राउने कुराको निर्णय धेरै पहिले नै भएको हो । अहिले केही कारणले गर्दा यो रोकिएको मात्र हो । यसमा पहिले परामर्शदाता ल्याउने, त्यसले आरएफपी रिपोर्ट तयार गर्ने र त्यसपछि टेन्डर गर्ने हो ।
हामीले परार्मशदाता ल्याईसकेका छौं । उहाँहरुले काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ र हामीले अब एक वर्ष भित्रमा कस्तो रणनीतिक साझेदार ल्याउने ? कति प्रतिशत शेयर दिने भन्ने बिषयमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने काम गरिरहेका छौ । यो सकिएलगत्तै हामी टेण्डर आह्वान गर्नेछौ ।
अहिले सबै क्षेत्रको ग्लोबल्ली विकास भईरहेको छ । यसकारण यसलाई समयअनुकुल यसको क्षेत्रलाई अझै व्यापक बनाउनका लागी रणनीतिक साझेदारको आवश्यक परेको हो । यसको के कती फाईदा हुन्छ ? भन्ने कुरा यो अहिले हामीले तयार गरिरहेको अध्ययन रिपोर्टपछि भनौला । अहिले सबैक्षेत्र ग्लोबल्ली चेञ्ज हुदै गरेकाले यसको फाईदा अवश्य छ ।
नेपाल टेलिकम आफैमा सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकोले यसमा सरकार र दलका केही व्यक्तिहरुको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बेला बेला समस्या आउछ होला हैन ?
यसमा ९१.४९ प्रतिशत सरकारको शेयर भए पनि नेपाल टेलिकमको आफ्नै छुट्टै नीति नियम छ । यसैलाई हामीले अनुशरण गरेर लैजानुपर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा ऐन नियममा आधारित भएरै गर्ने हो । सरकारी स्वामित्वका कारण हामी सरकारले दिने निर्देशनलाई अप्ठयारो भनेर मान्ने अवस्था हुदैन । हामी सरकारले दिने यस्ता निर्देशनलाई सुझावकै रुपमा लिने गरेका छौं । तर के समस्या चाहीं हुँदोरहेछ भने विभिन्न ऐन जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन कै कुरा गरौ, कतिपय समयमा तुरुन्तै निर्णय गर्न बाधक भइदिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गर्न त्यसो हुँदा गाह्रो हुन्छ । यद्यपी यसलाई हामी ठूलो समस्याका रुपमा लिएका छैनौं ।
अहिले मुख्यतया दुईवटा कम्पनी मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिन्छन् । यसमा नेपाल टेलिकमलाई अव्बल बनाउन तपाई के कस्ता रणनीति बनाएर अघि जाँदै हुनुहुन्छ ?
हामी अहिले प्रतिस्पर्धीलाई मध्यनजर गदैं हामी एकदमै उत्कृष्ट प्रतिफल दिनको लागि प्रयासरत छौ । हामीसँग विभिन्न प्रकारका सेवाहरु छन ।
ल्याडलाईन र सिडिएमए र वाईम्याक्सलाई समेत नयाँ प्रविधीमार्फत बितरण गर्ने प्रयासमा लागिपरेका छौ । यसबाहेक हामीले नेपालमै पहिलो फोरजी सेवा दिन थालेका छौ यसलाई देशव्यापी बनाएर अघि जाँदैंछौ । यसका लागी हामी टेण्डर गरिसकेका छौ अब छिट्टै यसको काम तीब्र रुपमा अघि बढ्दैछ । यसलाई ब्यापक रुपमा अगाडी बढाउर्न काम सुरु भईसकेको छ ।
अबको तत्कालको हाम्रो योजना भनेको फोरजी र एलटि हो । एलटि मार्फत नेपाल टेलिकम देशका कुना काप्चासम्म पुग्नेगरि यो योजना तयारी अवस्थामा छ ।
फोरजी सेवा शुरु भएको पनि धेरै भईसक्यो, तपाईलाई अहिले दिएको फोरजी सेवा गुणस्तरीय छ भन्ने लाग्छ ?
काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा मात्र टेलिकमको फोरजी सेवा सुरु भएको हो । अहिलेसम्म त्यहाँका ग्राहकहरुबाट हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं ।
अहिलेसम्म ८ लाख ग्राहकहरुले हाम्रो यो सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । तरपनि हाम्रा सक्रिय ग्राहक अलि कम देखिएको चाहीँ सत्य हो ।
त्यसको लागी हामीले फोरजी सेवा मार्फत विभिन्न सेवा उपयोग गर्ने गरी विविधता ल्याउदैछौं । त्यस्तैै हामीले अहिले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा उपभोक्ताले एकदमै रुचाएको कुरालाइ पनि भुल्नु हुदैन ।
नेपाल टेलिकमले मोबाईल मनी सञ्चालन गर्ने कुरा व्यापक चर्चामा छ । यसको तयारी के हुदैछ ?
साँच्चिकै हामी अहिले मोबाईलबाटै पैसा पठाउन र भुक्तानी गर्ने व्यस्थासहित मोबाईल मनी सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका छौं । यसका लागी हामी आफै पनि भन्दा सब्सीडरी कम्पनीमार्फत काम गर्न खोजिरहेका छौं ।
सब्सीडरी कम्पनीमार्फत काम थाल्न हामी सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले केही प्राबिधिक र कानुनी जटिलताहरु हुन्छन । यसर्थ तत्कालै यो सम्भव नहुने भएकाले अहिले हामी ईभालुएटर मार्फत सञ्चालन गर्नेगरि तत्काल काम अघि बढाई सकेका छौं ।
प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि तपाईले धेरै काम त गरिसक्नुभयो, अब पूरा गर्न बाँकी काम के के छन ? तपाईकै नेतृत्वमा पूरा गर्न चाहेका काम के हुन् ?
आगामी दिनमा ग्राहकहरुका कुनै गुनासो नआउने गरी हामी अगाडी बढ्दै छौं । यसमा फोरजी महत्वपूर्ण लक्ष्य हो र नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुलाई जहिले पनि कनेक्सनमा राख्नेछौं । डाटालाई हामीले प्राईममा राख्नेगरि एलटि सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ । यसैअनुसार काम पनि अगाडी बढिरहेको छ ।
अर्को भनेको नेपाल टेलिकमले दिईरहेको सेवाको बिलिङ सिस्टम गर्ने तयारी छ । ग्राहकहरुलाई जति सक्दो सजिलो पार्ने हाम्रो योजना छ । मेरै पालामा नेपाल टेलिकमलाई गुनासोरहित सेवाको रुपमा स्थापित गर्ने मेरो संकल्प रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले यति ठुलो मुनाफा आर्जन गरेर पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालमा पछि परेको गुनासो छ । तपाई यसमा के भन्नुहुन्छ ?
होईन हामी सामाजिक उत्तरदायीत्वको सवालमा निक्कै सचेत छौ । तपाई महाभुकम्पका बेला भन्नुहोस् बाढिपहिरो जस्ता बिपत्तीको समयमा समेत हामी निक्कै महत्वपूर्ण रुपमा सहभागी भएकै हो तर यसको उचित मुल्यांकन नभएकोजस्तो लाग्छ । हामी जनचेतनाका सवालमा हरेक पटक करोडौंको फोन म्यासेजमार्फत पनि सहयोग गरेका छौं ।
नेपाल टेलिकमले महाभूकम्पका कारण क्षती भएको धराहरा बनाउने भनेको थियो तर एकाएक पछि हटेको सुनियो किन होला ?
होइन हामी पछि हटेको होइन हामीले बनाउनका लागी जुनखालको प्रस्ताव भएको हो त्यो अनुसार भए अझैपनि हामी बनाउन तयार छौं । तर हामीले भनेअनुसार बनाउने कुरामा पुर्ननिमार्ण प्राधिकरण नमानेका कारण काम शुरु नगरेको हो । धराहराको लागी १ अर्ब नेपाल टेलिकमले सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय भैसकेको हो । त्यो गर्न अहिले पनि हामी तयार छौं ।
अन्त्यमा, नेपाल टेलिकमले आम जनतालाइ तत्काल अनुभूत् हुनेगरी र ग्राहकको मन जित्नेगरी के गदैंछ ? हाम्रा पाठक दर्शकलाई भनिदिनुहुन्छ की ?
मैले अघि पनि भनिसके सबैभन्दा पहिले हामी तत्काल नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाईनलाईन व्यवस्थित गर्ने तयारी गदैंछौ । त्यसपछि हामी फोरजी सेवालाई थप गुणस्तरीय र देशव्यापी बनाउदैंछौ । व्यापक रुपमा फाईबर टु बिल्डिङको योजना बिस्तार गदैछौ । यसबाहेक हामीले अत्यन्तै सस्तो मुल्यमा हामी हाम्रो सेवालाई आम ग्राहकबीचमा पु-याउने तयारीमा छौ । यो सँगै मोबाईल मनी, लोन दिने सुविधा, अहिले हामी तारसहित सबै सेवाहरु एउटै सिस्टमबाट लैजानेगरि तयार गदैंछौं ।
अहिले विभिन्न ठाँउमा अप्टिकल फाईबर बिस्तारको काम हुदैंछ त्यो मध्येपनि मुग्लिन र दुलेगौडामा अण्डरग्राउण्डको काम भईरहेको छ । हाम्रो १९७ लाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेका छौं जसका कारण ग्राहकका गुनासाहरुको तत्काल सम्बोधन हुनेछ ।
अब खाली बिल्डिङहरु सरकारलाई दिएर आम्दानी बढाउने तयारी छ । यसका साथै हाम्रा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका तालिम गोष्ठीहरुको पनि आयोजना गर्ने तयारी छ । जसले गर्दा हाम्रा ग्राहकहरुले सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउनेमा हामी विश्वस्त छौ ।
अन्तर्वार्ता, नेपाल टेलिकम
अब हुने भयो काठमाडौं–कुवेत सिधा उडान
को बन्ला प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्री ? यस्तो छ आँकलन
नेपाल टेलिकमको एफटीटीएच सेवामा निःशुल्क भ्वाइस सेवा
नेपाल टेलिकमले वितरण गरिरहेको घरसम्म फाइबर अर्थात् (एफटिटीएच) सेवाअन्तर्गत इन्टरनेट सेवाको साथै आइपी प्रविधिमार्फत चल्ने ‘भ्वाइस टेलिफोन’...
अर्थ / वाणिज्य कर्पोरेट नेपाल टेलिकम
नेपाल टेलिकमले ल्यायो नमस्ते रिचार्ज ब्राण्डको रिचार्ज कार्ड
नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरु रिचार्ज गर्नका लागि नमस्ते रिचार्ज (Namaste Recharge) ब्रान्डको रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउने...
अज्ञात विदेशी नम्बरबाट फोन आए नउठाउन नेपाल टेलिकमको आग्रह
नेपाल टेलिकमले विदेशी नम्बरबाट आएको अज्ञात फोन नउठाउन आग्रह गरेको छ । टेलिकमका अनुसार शनिबारदेखि नेपाली...
नेपाल टेलिकमको मनसुन अफर, सरकारले कर बढाएपनि पहिलेकै दरमा विभिन्न सेवा
नेपाल टेलिकमले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार आफ्नो दरमा पनि केही परिवर्तन ल्याउने...
July 04, 2018 TV-Annapurna 0
तोकिएको समय अगावै भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा टेलिकमको निशुल्क इन्टरनेट
नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा संचालनमा आएको छ। टेलिकमले...
नेपाल टेलिकम समाचार
July 01, 2018 TV-Annapurna 0
मन्त्री बाँस्कोटाद्वारा नेपाल टेलिकमको निरीक्षण भ्रमण
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकम पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय विराटनगरको निरीक्षण...
June 25, 2018 TV-Annapurna 0
फोनबाट गरिएको कुराकानी रेकर्ड राख्ने प्रविधि छैन : टेलिकम
ल्याण्डलाइन टेलिफोन र मोबाइलमा भएको कुराकानीको आवाज अभिलेख राख्ने (रेकर्ड गर्ने) प्रविधि नरहेको नेपाल टेलिकमले बताएको...
June 18, 2018 TV-Annapurna 0
धवलागिरि क्षेत्रमा इन्टरनेट चलाउन प्रयोग हुने अत्याधुनिक ‘थ्रिजी’ सेवा विस्तार भएको छ । हाल ८० ठाउँबाट...
June 08, 2018 Annapurna TV 0
नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाईबर नेटवर्क तीन सय ७५ किलोमिटर पुग्यो
नेपाल टेलिकमले हालसम्म तीन ७५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क जडान गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीले २०७५...
यी चार जिल्लामा नेपाल टेलिकमको निशुल्क इन्टरनेट सेवा
नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्लाका ६ सय ७५ स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको...
सफल एवं सिद्धहस्त स्त्री रोग विशेषज्ञसँगै कुशल गीतकार, गायक ,कथाकार एवं चलचित्र निर्मातामात्रै होइन देशप्रेमि व्यक्तित्वको...
नेपाल टेलिकमको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता एक करोड भन्दा बढी पुगेका छन् । कम्पनीले हालै प्रकाशित गरेको...
नेपालमा १५ लाख फोरजी प्रयोगकर्ता, एनसेलको इन्टरनेट बिश्वकै महंगो
नेपालमा फोरजी सेवाको प्रयोग गर्नेको सङख्या झण्डै १५ लाखको हाराहारीमा रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनााएको छ...
नौ महिनामा नेपाल टेलिकमको नाफा १२ अर्ब
नेपाल टेलिकमको चालू आ व को ९ महिनामा गत बर्ष भन्दा चार दशमलव ७२ प्रतिशतले बृद्धि...
April 23, 2018 TV-Annapurna 0
बाग्लुङ र डोल्पा जिल्लाका अति दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको जीएसएम मोबाइल सेवा
नेपाल टेलिकमले बाग्लुङ जिल्लाको उत्तर पश्चिम भेगमा रहेको ढोरपाटनमा थ्रिजी विटिएस स्थापना गरी २०७५ वैशाख ९...
April 15, 2018 Annapurna TV 0
नेपाल टेलिकमको बम्पर अफर: निशुल्क सिम, छ महिनासम्म बोनस
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी) को अवसरमा नेपाल टेलिकमले विभिन्न सेवामा छुट दिने भएको छ...
April 13, 2018 TV-Annapurna 0
यस्ता छन् नयाँवर्षको उपलक्ष्यमा टेलिकमका आकर्षक प्याकहरु
नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा उपभोक्ताको थप सुविधाका लागि नयाँ वर्ष अफर २०७५ उपलब्ध गराउने भएको...
March 30, 2018 Annapurna TV 0
नेपाल टेलिकमले आजबाट पैसा सापटी दिने, यस्तो छ प्रक्रिया
नेपाल टेलिकमले आज शुक्रबारदेखी ‘नमस्ते क्रेडिट’ सेवा सूचारु गर्ने भएको छ । ग्राहकको सेवाका लागि टेलिकमले...
March 14, 2018 TV-Annapurna 0
नेपाल टेलिकमले गर्यो सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार
नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तारको क्रमलाई तिव्रता दिएको छ । कम्पनीको मोबाइल सेवा नपुगेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न...
March 01, 2018 Annapurna TV 0
नेपाल टेलिकमले ल्यायो होलीमा अफरै अफर, प्रयोग यसरी गर्नुहोस्
नेपाल टेलिकमले फागु पूर्णिमा होली पर्वको अवसरमा विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेको छ। टेलकमका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यद्वारा...
टेलिकमबाट ब्यालेन्स सापटी सेवा सुरू, अब फोन नकाटिने
१५ चैत, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै ‘ब्यालेन्स’ सकिएर फोन काटिने समस्या अब समाधान...
February 24, 2018 TV-Annapurna 0
भक्तपुरमा पुल बनाउँदा ५ जिल्लाको टेलिफोन अवरुद्ध
१२ , फागुन, काभ्रे । पुल निर्माणका क्रममा अप्टिकल फाइबर चुँडिएपछि भक्तपुरसहित ५ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको...
February 18, 2018 Annapurna TV 0
नेपाल टेलिकमको ‘फ्रिडम प्याक’ २५ रुपैँयामा अनलिमिटेड कल, एसएमएस र डाटा
फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि ‘फ्रिडम प्याक’ उपलब्ध गराएको छ...
नेपाल टेलिकमको मुनाफा रकमबाट लाभांश वितरण गर्ने तयारी
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । नेपाल टेलिकम कम्पनीले ०७३–७४...
December 30, 2017 Annapurna TV 0
साताको चारै दिन घट्यो सेयर बजार, स्टान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल टेलिकममा लगानीकर्ताको आकर्षण
यो साता चार दिन कारोबार भएकोमा चारै दिन सेयर बजार घटेको छ । आइतबार ४.४७ अंकले...
December 21, 2017 Annapurna TV 0
यस्ता छन नेपाल टेलिकमका ‘विन्टर अफर’
नेपाल टेलिकमले जाडो मौसमका लागि विभिन्न प्रकारको ‘विन्टर अफर’ ल्याएको छ । कम्पनीले भोलि शुक्रबारदेखि लागू...
ग्राहकहरुलाई नेपाल टेलिकमको आग्रह, अज्ञात नम्बरबाट फोन आए १८८ निःशुल्क फोन गर्नुहोस्
काठमाडौँ । केही समयदेखी अवैध नम्बरहरुबाट आउने टेलिफोनले विभिन्न समस्याहरु निम्ताईरहेको छन् । विदेशबाट टेलिफोन कल...
November 11, 2017 TV-Annapurna 0
नेपाल टेलिकममा बढ्यो लगानीकर्ताको आकर्षण
२५ असोज, काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्रने खबर चल्न थालेपछि बजारमा कम्पनीको सेयर कारोबार...
विभिन्न ४ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको ईन्टरनेट सेवा विस्तार
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले कात्तिक १४ गते सम्ममा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ५५ स्थानमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा...
October 17, 2017 Annapurna TV 0
यी हुन नेपाल टेलिकमले तिहारमा दिएका अफरहरु, हेर्नुहोस् विस्तृतमा
काठमाडौं | नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरुको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न...
September 30, 2017 TV-Annapurna 0
एडीएसएलको घट्यो मूल्य, विदेशबाट आएको फोन उठाउँदा बोनस
१५,साउन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा विदेशबाट आएको कल उठाउँदा पनि अब बोनस पाइने भएको छ । टेलिकमका...
August 17, 2017 Annapurna TV 0
तीन दिनमा नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताद्धारा १ करोड १२ लाख निःशुल्क एसएमएस
टिभी अन्नपूर्ण, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरुले १ करोड १२ लाख निःशुल्क एसएमएस आदान प्रदान गरेका...
August 16, 2017 Annapurna TV 0
नेपाल टेलिकमले एक वर्षमा १५ अर्ब एक करोड नाफा कमायो
टिभी अन्नपूर्ण, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एक वर्षमा १५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको...